Huawei Watch, nyocha na Spanish | Gam akporosis
Huawei Watch, anyị na-enyocha elekere kachasị mma na Wear gam akporo
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Huawei, Nyocha, smartwatch
Na 2015 na Asia emeputa juru anyị anya na ya Huawei Watch, Huawei smartwatch mbụ nke o bu n’obi iji nweta akara aka na ahịa smartwatch.
Ugbu a anyị ewetara gị a nyocha zuru oke nke Huawei Watch, A smartwatch nke hapụworo anyị ezigbo mmetụta dị mma maka nhazi ya na arụmọrụ ya. Onye mmeri kwesịrị ekwesị maka Samsung Gear S2, nnukwu nche na-akụ n'ahịa ndị na-eyiri uwe.
1 Huawei Watch nwere ihe mara mma, nke adịchaghị ma dịkwa mma
2 Njirimara teknụzụ nke Huawei Watch
5 Arụ ọrụ na ndụ batrị nke Huawei Watch, ihe ịtụnanya mara mma
6.1 Uche ederede
Huawei Watch nwere ihe mara mma, nke adịchaghị ma dịkwa mma
Otu n'ime ogige kachasị mkpa na smartwatch bụ na ọ dị ka elekere egwu. Na akụkụ a, Huawei Watch kpara ya. Site na ahịrị ndị yiri nke Moto 360, na-echekwa ndịiche, Huawei smartwatch ọhụrụ ahụ karịrị ya na njedebe site na ịnye na-eguzogide ọgwụ igwe anaghị agba nchara nwere a sapphire crystal mkpuchi nke ahụ na-echebe Huawei Watch megide nsogbu ma ọ bụ esemokwu nwere ike.
Ma nke a bụ ihe dị oke mkpa. Anwalewo m Huawei Watch maka otu ọnwa na ahụ nke ngwaọrụ enweghị akara. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ejiri rubel ete ya ma ọ bụ na ọ na-ata ahụhụ n'oge ụfọdụ. Huawei elekere ọhụrụ nwere ike ijikwa ya niile. E wezụga nke ahụ ájá na mmiri na-eguzogide Ha na-enye gị ohere ịsa ahụ na enweghị nsogbu na Huawei Watch, ma ọ bụ jiri ya na ụbọchị mmiri ozuzo na-enweghị nchegbu gbasara elekere na-agba mmiri.
N’elu nche ahụ anyị hụrụ otu bọtịnụ n’akụkụ aka nri. Ọnọdụ ya dị elu dị elu na-eme ka ọ dị mma iji ya, ịbụ obi ụtọ na-eguzogide ma na-eguzogide ọgwụ iji.
Ihe ndị ahụ masịrị m elekere, ọ bụ ezie na a ghaghị iburu n'uche na, n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ, Huawei Watch nwere otu nsụgharị nwere nha nke 42 x 42 x 11.3mm.
Echere m na ọ bụ mmụba zuru oke maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịga ụlọ ahịa ọ bụla ma gbalịa nche iji gosi na ọ dabara n'ụzọ zuru oke na nkwojiaka.
Ihe nlereanya anyị nwere ike ịnwale wee jiri eriri akpụkpọ anụ dị ezigbo ụtọ na mmetụ ahụ. Agbanyeghị Huawei na-enye eriri dị iche iche dabere na ihe masịrị gị, mmụba ya dị na 18 mm na-enye gị ohere ịhọrọ ọnụọgụ buru ibu nke akwụkwọ ahịa ndị Asia.
Dị na agba atọ, oji, ọla-ọcha na ọla-edo, ojiji nke Huawei Watch kwa ubochi di nma ma dikwa nma site na ya 62 gram nke ibu, na-eme ka elekere ahụ anaghị echekwa nkwojiaka n'oge ọ bụla.
La customizable nche ihu Ọ ga-enye anyị ohere ịhọrọ site n'ọtụtụ anụ dị iche iche amaraworị ndị ọrụ gam akporo Wear, yana inwe ike ibudata ihu ihu ihu ihu ka enweghị nsogbu na nke ahụ.
Na nkenke, ọ na-egosi nke ahụ Huawei ejiriwo nlekọta zuru ezu ka Huawei Watch gị pụta ìhè dị ka elekere mara mma na anyị nwere ike ịhazi dịka ọ masịrị anyị, na-eji eriri akpụkpọ anụ ya iji nye ya egwuregwu egwuregwu ma ọ bụ gbanwee na eriri dị egwu karị ma ọ bụrụ na anyị na-achọ nhazi mara mma. Enweghị ihe ịkatọ na nke a.
Njirimara teknụzụ nke Huawei Watch
Akụkụ Ahụ: 42 x 42 x 11.3mm
Ihuenyo: 1.4 ”AMOLED; Safaiya kristal
Mkpebi: 1.4 ”(400 x 400) 286 dpi
Processor: Snapdragon 400 (4x 1.2 GHz) // Adreno 305
Ebe nchekwa: 4 GB (ọ bụghị ịgbasa site na kaadị microSD)
Sistemụ nrụọrụ: Android Wear
Ihe nkowa ndi ozo: IP67 nguzogide mmiri / 802.11g njikọta / Wifi / Bluetooth 4.0
Sensọ: Sensọ Ọnụego Obi / Accelerometer / Gyroscope na Engine Haptic
Batrị: 300 mAh // Nkwụnye ụgwọ ikuku
Ahịa: Euro 349 site na Amazon
Na mpempe akwụkwọ anyị nwere ụdị njirimara nke smartwatch ọ bụla dị elu. Mana olee otu Huawei Watch si arụ ọrụ? N'eziokwu, dị ka silk. Huawei ohuru smartwatch mara mma ngwa ngwa, Achọpụtaghị m lag n'oge ọ bụla, na-enye anyị ohere ịgafe na windo dị iche iche n'ụzọ mmiri.
O di nwute na enwebeghị m ike nwale ọhụrụ version nke gam akporo Wear na Huawei Watch ebe ọ bụ na ọ bụ n'ihi nsogbu ọrụ aka ha ga-egbu oge mmelite ahụ ntakịrị, mana ihe mmetụta n'ozuzu ha adịla mma.
Ijikọ elekere na ama anyị dị mfe. Naanị ibudata ngwa ngwa nke Android Wear, dị na ụlọ ahịa ngwa Google, ka igwe elekere gị gakọrịta ekwentị gị site na Wi-Fi ma ọ bụ Bluetooth.
Banyere arụmọrụ ya, Huawei Watch, na mgbakwunye na-eje ozi dị ka ihe nkiri nche, na-enye anyị ohere ịnata ọkwa, gụọ ha na zaghachi ozi email ma ọ bụ WhatsApp ọ bụla bịakwutere anyị. Ee, ị gụrụ n'ụzọ ziri ezi. Otu ebe ha kwuru na enweghị ike ịza ọkwa WhatsApp na gam akporo Wear mana ọ bụghị eziokwu kpamkpam, ebe ọ bụ na site na iwu olu ị nwere ike ịza n'enweghị nsogbu.
Ma ọ bụ na olu ude usoro na-arụ ọrụ nke ọma, na-eje ozi ka jiri ọrụ Google Ugbu a. Enwebeghị m nsogbu ọ bụla n'akụkụ a. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịrịọ ozi gbasara ihu igwe, bido ihe nchọgharị ahụ, kpọọ egwu ... nhọrọ na-adọrọ mmasị ma dị mma iji mee ihe na-enye gị ohere ịpịtụkwuo ohere nke Huawei Watch dị ka elekere anya.
Otu n'ime ihe ndị wutere m nke kachasị na smartwatches dị iche iche nke m gbalịrị, ewezuga Samsung Gear S2, bụ ihe mmetụta ụda obi. Mgbe m na-apụ maka ịgba ọsọ, ọ na-amasị m iji nyochaa obi m na nke a, Huawei Watch adaghị.
N'adịghị ka nche ndị ọzọ, nke ị ga-ahapụrịrị ogwe aka ya ka ọ na-achọpụta pulsations, ọbụnakwa mgbe ụfọdụ nchọpụta nke usu ahụ dara, naIhe mmetụta obi nke Huawei na-arụ ọrụ nke ọma, ọbụlagodi na mmegharị.
Enweela m ya na nyocha nke obi na ihe dị iche dị ntakịrị, otu ma ọ bụ abụọ kụrụ aka n'ọtụtụ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ iji uru a ma chọọ ezigbo ihe mmetụta obi na smartwatch, Huawei Watch agaghị meechu gi ihu.
Nakwa ekele ya 6-axis, ọhụụ Huawei ọhụụ nwere ike ịkọwapụta nke ọma mgbe ị na-agba ọsọ, na-eje ije, na-agagharịWdg, na-enye gị ohere ịdebe mmega ahụ na ngwa ndị etinyegoro, yana dakọtara na ngwa dịka Nike Plus.
Ọzọ nke ike nke Huawei Watch na-abịa na ihuenyo ya. Ma ọ bụ na ndị otu imewe ka webatara 1.4-anụ ọhịa ihuenyo na AMOLED technology na awade magburu onwe sharpness na a ọma calibrated agba okpomọkụ na-enye ezigbo onyonyo onyonyo na gburugburu ọ bụla, yana ịnye ezigbo nlele ikiri. Tụkwasị na nke ahụ, eziokwu nke inwe ike ịnwe ihuenyo mgbe niile na-arụ ọrụ na-enweghị iri oke batrị nke elekere bụ nkọwa zuru ezu.
Na ihuenyo Huawei Watch ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịgụ ederedeỌ bụ ezie na Wear gam akporo anaghị arụ ọrụ nke ọma na nnukwu onyogho, na-ebelata ogo. N'ezie, na ngalaba a, anyị enweghị ike ịta Huawei ụta.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Huawei Watch enweghị ihe mmetụta ọkụ, dikpọ oku na-enye ndị magburu onwe sharpness ọ bụla na gburugburu ebe obibi. Huawei Watch na-enye gị ohere ịhazi ihie ihuenyo na-enye ọkwa ise mana m na-eji ya mgbe niile na 4 ma enwebeghị m nsogbu ọ bụla na nke ahụ.
Ee, akara aka na-egosi mgbe ejiri ya, yabụ ị ga-ehichapụ ihuenyo kwa mgbe ka Huawei Watch na-adị mma. Obi sie gị ike, na ihuenyo sapphire na-akwado ihe niile. Onwe m, ejiri m ụdị ihe ọ bụla kpochaa ya na enweghị m na-enweghị nhụjuanya ọ bụla na ihuenyo elekere.
Arụ ọrụ na ndụ batrị nke Huawei Watch, ihe ịtụnanya mara mma
Su 300 mAh batrị Ọ dị ntakịrị ala karịa nke ụdị ndị ọzọ, ọ bụ ezie na Huawei na-egosi na mkpa adịghị adaba naanị na ọnụọgụ ebe ọ bụ na ikike nke Huawei Watch dị elu karịa nkezi. Gịnị bụ ihe nzuzo gị? ihe njikarịcha zuru oke n'etiti ihuenyo AMOLED na sọftụwia elekere.
Na mbụ achọpụtara m na nche elekere dị obere karịa otu ụbọchị na ọkara. Nnukwu ndakpọ olileanya ebe m na-atụle nke ahụ nnwere onwe nke na-erughị ụbọchị abụọ abụghị nke kachasị adaba maka elekere anya. N'ihi ya amalitere m iji ihu igwe AMOLED wee gbanwee.
Iji oji ojii na ịgbanyụ elekere n'abalị elekere ejidela m ụbọchị atọ nke iji na nche na nkezi nke 16 awa kwalitere ruo ugbu a. Na na m nyere otu ojiji dị ka elekere ndị ọzọ nke na-adịgideghị karịa otu ụbọchị na ọkara.
O doro anya iji a ọzọ yi interface na ihuenyo mgbe niile na ya obodo kwụụrụ na-ata ahụhụ, ụbọchị na ọkara m na-aza ajụjụ, ma na-agbanyụ elekere n'abalị m jisiri ike ruo ụbọchị abụọ na-enweghị nsogbu.
Ọ dị mma, a ka nwere ụzọ dị anya iji nweta ezigbo nnwere onweEchere m na elekere zuru oke kwesịrị ịdịru otu izu, mana ụbọchị atọ adịghị njọ ma ọlị. Naanị otu ma na m na-ahụ abịarute na ya odori isi.
Ma obu na Enweghị m mmasị na sistemụ igwe eletrik nke Huawei Watch. N'uche m, ha kwesịrị ịgbaso nzọụkwụ nke ụdị ndị ọzọ dịka Samsung Gear S2 ma ọ bụ Moto 360, na-enye usoro nke na-enye gị ohere iji elekere mee ihe iji gwa oge mgbe ị na-akwụ ụgwọ.
N'ihe banyere Huawei Watch, isi na-akwụ ụgwọ na-eme ka elekere ahụ dị elu na-efunahụ arụmọrụ ahụ. Achọpụtala m na mgbe ụfọdụ, ntọala anaghị amata elekere, ọ bụ ezie na nhicha nke smartwatch m edozi nsogbu ahụ.
Huawei mere a ọrụ magburu onwe ya na Huawei Watch, Na-eguzo na nlele ndi ozo na gam akporo Wear. N'ime ihe niile m nwara n'afọ a, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nhọrọ m masịrị m nke ukwuu.
Un ihe mara mma nke mara mma nke na-ewelite mmanya na ahịa smartwatch ekele ya magburu onwe imewe, àgwà nke risịrị na obodo kwụụrụ tụnyere ya asọmpi. Ugbu a, ọ bara uru ịzụta smartwatch? N'uche m, arụmọrụ nke ngwaọrụ ndị a ka pere mpe na uru ha bara bụ na ọ siri ike ịkọwa ego gị.
N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ igwe elekere anya, ị na-enwe ọ toụ ịbụ otu n'ime ndị mbụ nwere ụdị ụdị a, egbula oge. Huawei Watch bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma iji tụlee. Na mgbakwunye na afọ ugbu a 2016 gam akporo Wear ga-enweta mmelite nke atọ nke nwere ike iju anyị anya.
4.5 akara kpakpando
Nyochaa: Alfonso nke mkpụrụ osisi
Onye edemede: 100%
Magburu onwe ya risịrị
Nnukwu ogo nke ihuenyo AMOLED gị
Nnwere onwe nke ihe ruru ụbọchị 3 nke ojiji
Enweghị m mmasị na ntọala ịgba ụgwọ ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei Watch, anyị na-enyocha elekere kachasị mma na Wear gam akporo
Ntuziaka onye ọrụ asị showering na ya adịghị atụ aro ya
Zaghachi na Lobombre
Etu ị ga-esi nweta ụfọdụ atụmatụ kacha mma gam akporo N na ama gị
Ihe ọhụrụ Xiaomi na-apụta na ihuenyo 4,3-inch na Snapdragon 820 mgbawa